हाडजोर्नी दुखाई देखि माेटाेपन घटाउनेसम्म अचुक औषधि डल्ले खुर्सानी ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / हाडजोर्नी दुखाई देखि माेटाेपन घटाउनेसम्म अचुक औषधि डल्ले खुर्सानी !
admin July 27, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 48 Views
एजेन्सी – डल्ले खुर्सानी स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवन प्राय मानिसहरको भान्सामा हुने गर्दछ ।
यसको सेवन गर्दा धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गर्छौं । त्यसमा नि डल्ले अर्थात अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ ।
यो खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको हुन्छ । यसको नियमित सेवन गर्दा मोटोपन घटाउछ ।
रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ । डल्ले खुर्सानिले सवैभन्दा पिसावको विरामीलाई लाभदायक छ । यसले हाडजोर्नी लगाएतका दुखाइका बिरामिलाई पनि निकै फाइदा पुर्याउछ ।
यो पनि पढ्नुस्: लज्जावती झारको अदभूत औषधिय गुण
एजेन्सी – लज्जाबति झारलाई लाजवंती वा लाजमान्ने झारको नामले पनि चिनिन्छ। यसको बानस्पतिक नाम भने माईमोसा पुदिका हो। हात वा अन्य कुनै बस्तुले छुने बित्तिकै यसको पात ओइलाएर बन्द हुने हुनाले यसलाई लाजवन्ति झार भनिएको हो । गाउँघरतिर यसलाई गाइबस्तुको घाँसको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।यस बाहेक यसलाई जडिबुटि वा औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अभुमका हर्बल प्रा लि अहमदाबादका डाइरेक्टर डा दीपक आचार्य यहि झारको औषधिय गुणको बारेमा बिगत १५ बर्षदेखि भारतको बिभिन्न क्षेत्रमा रहेर अध्ययन गरिरहेका छन् । भारतको सुदूर आदिवासी अंचल जस्तै पातालकोट (मध्यप्रदेश), डांग (गुजरात) र अरावली (राजस्थान)का आदिवासिहरुले कसरि परम्परागत रुपबाट यसलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् र र यसले कसरि काम गर्छ भन्ने उनले अध्ययन गरेका छन् ।
आधुनिक विज्ञानको अनुसन्धान अनुसार भाँचिएको हड्डि र मांसपेशिको आंतरिक घाउको उपचारको लागि लाजवन्ति झार अति उपयोगि हुन्छ। त्यस्तै, लाजवन्ति झारको जरा तथा बिउको चूर्णलाई दूधसंग मिलाएर खानाले पुरूषमा हुने हुने वी-र्यको कमीलाई धेरै कम गर्दछ।
लाजवन्ति झारको पातको धुलोलाई मख्खनसंग मिलाएर बाबाशिरको घाउमा दिनस्को दुइ वा तिनपटक लगाउनाले छिट्तै निको हुन्छ। यस्को पातलाई पिसेर नाइटो वरिपरि लगाउनाले धेरै पिसाब आउने समस्या बन्द हुन्छ।
यसको पातको काड-पानी बनाएर खुवाउनाले मधुमेहको रोगिलाई धेरै फाइदा गर्छ। त्यस्तै, यसको बिउको धेउलो बनाएर नियमित सेवन गर्नाले शा-रिरिक दुर्बलता पनि कम हुन्छ। लाजवन्ति र र अश्वगंधाको जरालाई समान मात्रामा मिलाएर पिस्ने र लेप तयार गरेर स्तनमा हल्का मालिस गर्नाले स्त्न झोलिने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ।
आधुनिक विज्ञानको अनुसन्धान अनुसार भाँ-चिएको हड्डि रर मांस-पेशिको आंतरिक घाउको उपचारको लागि लाजवन्ति झार अति उपयोगि हुन्छ। त्यस्तै, लाजवन्ति झारको जरा तथा बिउको चूर्णलाई दूधसंग मिलाएर खानाले पुरूषमा हुने हुने वी-र्यको कमीलाई धेरै कम गर्दछ।
Previous बियरले यति धेरै खत रनाक रोगबाट जोगाउछ, जन्नुहोस बियरका फाइदा !
Next ठाकुर–महतो पक्षसँग अब तीन विकल्प